Qoddobo Ka soo Baxay Shir Mareegaha Somaliland Ku Yeesheen Hargeysa | Salaan Media
Qoddobo Ka soo Baxay Shir Mareegaha Somaliland Ku Yeesheen Hargeysa
Hargeysa (SM)-Mareegaha Internet-ka ee Somaliland ayaa maanta shir ay ku yeesheen magaaladda Hargeysa waxay ka soo saareen Go’aamo ka kooban 8 qoddob.
Sida lagu sheegay war-saxafadeed ay ka soo saareen kulankaas oo u dhignaa sidan:-
“Shabakadaha Internet-ka ayaa shir ay maanta 07/10/2013 ay ku yeesheen Magaaladda Hargeysa waxay ku falan-qeeyeen qoddobo muhiim ah oo la xidhiidha gudashada waajibaadkooda shaqo ee ay bulshadda u hayaan isla markaana ay u noqon lahaayeen qaar ilaaliya dhawrsanaanta iyo dhex-dhexaadnimadooda mihnadoodu farayso.
Waxa shirkan ay wakiiladda mareegaha iyo xubno ka mid ah mulkiileyaasha shabakaduhu, Wasiirka Warfaafinta u soo jeediyeen inuu kaalin ka qaato sidii ay u noqon lahaayeen mareeguhu qaar dhisma oo xukuumaddu ay ula dhaqanto sida warbaahinta kale ee dalka.
Dood dheer ka dib waxa suxufiyiinta mareeguhu ay soo saareen qodobadan:-
1) Waxaanu soo dhawaynaynaa Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo aanu u arragno inuu yahay qofkii ku habboonaa oo loo dhiibay xilkii iyo masuuliyaddii uu xirfadda u lahaa. Waxaanu aaminsan nahay inuu yahay masuul ka jibo keeni kara masuuliyadda culus ee wasaaradda iyo wada shaqaynta togan ee saxaafadda guud ahaan mid madax banaan iyo mid dawli ahba.
2) Waxaanu Taageersan nahay kulankii uu Wasiirka Warfaafintu la yeeshay shabakadaha Internet-ka 24-kii July 2013-kii. Waxaanu noqday Wasiirkii u horreeyay ee wasaaradaas soo mara ee kulan la yeesha shabakadaha Internet-ka.waxaanan ku baaqaynaa in kulammada noocaas ahi noqdaan qaar joogto ah.
3) Waxaaanu balan-qaadaynaa inaanu baahinno warar sugan oo dheeli-tiran.
4) Waxaanu caddaynaynaa inaanu la shaqayn doono oo baahin doono wararka Xukuumadda Somaliland iyo axsaabta mucaaridka ah ee dalkaba.
5) Waxaanu iska xil saari doonaa inaanu ka feejignaano waxyaabaha caqabada ku noqon kara nabadgelyadda, horumarka dhaqaalaha, iyo wada jirka reer Somaliland.
6) Waxaanu Wasiirka Warfaafinta ku boorrinaynaa inuu kaalin weyn ka qaato sidii mareegaha Internet-ku ay u noqon lahaayeen qaar hela xuquuqda warbaahinta kale oo aan laga takoorin wararka iyo shirarka jaraa’id ee masuuliyiinta xukuumadda.
7) Waxaanu xukuumadda u jeedinaynaa Xukuumadda iyo wasaaradda warfaafinta u soo inay ansixiso oo aqoonsato ururka mareegaha Somaliland ee (SOA).
8) In Wasiirku shabakadaha internet-ka u raadiyo tababaro kor loogu qaadayo xirfada suxufiyiinta ka hawl gala mareegaha Internet-ka oo noqday warbaahin dhamaystiran oo koobsatay (maqal,muuqaal iyo qoraalba).”